Raad Raac News Online – Kenya oo Bilaabaysa Nidaam lagu Xaqiijiyo Aqoonsiga oo Internetka ah
Kenya oo Bilaabaysa Nidaam lagu Xaqiijiyo Aqoonsiga oo Internetka ah
Dawladda Kenya waxay damacsantahay inay bilowdo nidaam aqoonsi oo internetka ah si loo hakiyo dambiyada lagu galo internetka laguna abuuro xaalad sugan oo ganacsiga looga sameeysan karo internetka.
Nidaamka internetka ku shaqeeya, oo loo yaqaan Furaha Kaabayaasha Dhaqaale ee Shacabka (PKI), waxaa ka mid ah sameyska hay’ado diiwan gelinta ka shaqeeya oo diiwaan galinaya qof walba oo internetka isticmaala una sameynaya aqoonsi u gooni ah, sida uu sheegay Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaadhsiinta Bitange Ndemo.
Isticmaalayaasha shaqsiyaadka ah waxaa u suuro gali doonta inay diiwaan gashadaan cinwaankooda khaaska ah ee emailka iyo macluumaad lagu aqoonsan karo halka ganacsatadana ay ku diiwan gali doonaan halka lagala xidhiidhi karo iyo shahaadooyinkooda.
“Nidaamka aqoonsiga ee internetka wuxuu noqon doonaa [la mid yahay] kaararkii aqoonsiga ee hore loo isticmaali jiray oo kale waxaana loo isticmaali doonaa in lagu xaqiijiyo aqoonsiga dadka internetka isticmaala,” Ndemo siduu u sheegay Sabahi. “Tani waxay khaasatan caawinaysaa dadka ka ganacsada internetka si ay u [aqoonsadaan] dadka ay kala xidhiidhayaan dhinaca kale ee isgaadhsiinta.”
Wuxuu sheegay inay dawladdu dhameystirtay habkii helitaanka waxa kaliya oo hadhayna ay tahay in shirkad dhaqan galisa nidaamka lacag la siiyo.
“Anaga oo ku sii socona nidaam dawladeed oo internetka ku salaysan si kayd diiwan galin oo hal meel ah loo sameeyo, iyo iyadoo uu qof walba oo shacabka ka tirsan uu qabatimayo nidaamka taleefanada gacanta inuu ku sameysto ganacsiga, ma awoodi karno inay nidaamyadeenu noqdaan kuwo aan sugnayn” Ndemo ayaa yidhi.
Iyadoo uu gaadhitaanka internetka ee Kenya ka sareeyo 35%, dambiyada lagu galo internetka ayaa dhibaato weyn amniga ku ah, ayuu yidhi.
Ganacsiga internetka ayaa balaayiin shilin soo galiya dhaqaalaha, balse awoodiisa dhabta ah ma uusan gaadhin sababtoo ah waxaa sii badanaya kiisaska khiyaanada internetka oo lala beegsanayo bangiyada, hay’adaha iyo sidoo kale dadka goonida ah ee ka adeegta ama ka ganacsada, ayuu yidhi.
Ndemo wuxuu sheegay in haddii la rabo in laga hortago kuwa afduubta khadadka interneetka iyo dambileyaasha kale ee internetka, dawladdu waa inay Kooxda Heeganka Xaaladaha Deg-dega ah ee Kombiyuutarada ka samaysaa Guddiga Isgaadhsiinta ee Kenya si ay u dhaqan galiyaan PKI una daba galaan khataraha iman kara iyo siyaabaha looga hortagi karo.
“Hore ayaan u diwaan galinay dhamaan kaararka SIM-ka una xidhnay taleefanada gacanta oo faalsada ah oo aan lahayn aqoonsiga. Tani waxay noo sahlaysaa [aqoonsiga] qof walba oo isticmaala taleefanka gacanta,” ayuu yidhi. “Teenna xigtana [oo xoogga saari doonno] waa khadadka internetka. Waxaan rabnaa in nidaamyadeenu ay iska celin karaan khiyaanada.”
Shirkii Bariga Afrika ee Ammaanka Inetrnetka ee 2012-ka, oo Diseembar 4teedii-5teedii lagu qabtay Nairobi, wuxuu isku keenay dhamaan inta ay khuseeyso ee ka socda dawladaha, hay’adaha dhaqan galinta sharciyada, shirkadaha lacagta iyo khuburada ammaanka si loo abuuro aqoonsi dhanka khataraha ka imaan kara dambiyada lagu galo inetnetka ah laguna aqoonsado xeelado amni oo looga hortagi karo.
Sammy Kioko, oo ah maareeyaha isutaga Amniga Internetka ee Afrika, oo soo qabanqaabiyay shirka, wuxuu sheegay in khataraha internetka ay ka mid yihiin dhibaatooyinka amniga ee aagga ka jira kuwa ugu dibka badan oo la doonayo in dhaqso wax looga qabto.
“Dhowr jeer oo la taabto qeybta qoraalka ee kombiyuutarka kaddib, waddamo, kooxo argagixiso, hay’ado sharci darro ah iyo shakhsiyaad gooni u shaqeystayaal ah ayaa weerar internetka ah ka qaadi kara meel kasta, waqti walba, kuwaasoo is-daba marinaya oo waxyeelaynaya dimuqraadiyada iyo hab nololeedba,” ayuu yidhi, sida laga soo xigtay Biztech Africa. “Marka la eego baaxadda khatarta ka iman karta internetka, waxay u baahan tahay in dhamaan kuwa ay khuseeyso oo dhan ay si firfircoon uga shaqeeyaan, kuwaasoo ay ku jiraan shirkadaha ka tirsan dhamaan waaxda waxsoosaarka.”
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in Bariga Africa ay leedahay aasaasyo ay ku noqon karto qaybtii koowaad ee Africa oo sameeysa hab cusub oo xal loogu helo amniga internetka.
“Waxaa ka mid ah qeybta ganacsiga goonida ah oo gaarta dunidoo dhan fahansanna habka maamulka sare iyo saameeynta caalami ee amniga inetrnetka, warshado teknoolojiga sare ah oo isku haleeynaya inay sugaan amniga raasumaalkooda, jaamacado cilmi-baaris oo caan ah iyo macalimiin, iyo hoggaamiyeyaasha sharciga rayadka oo aqoon leh diyaarna u ah shaqo,” Kioko ayaa yidhi.
Dabagalka dambiileyaasha internetka
Maareeya guud ee Shirkadda Ganacsiga Kenya ee MTN Tom Omariba wuxuu u sheegay Sabahi in u qoondaynta aqoonsi gooni ah cinwaan kastoo Nidaamka Internetka ah ay caawin doonto dabagalka iyo helitaanka kuwa ku kaca dambiyada internetka.
“Waxaa jira kuwo afduub ku sameeyay dadka emailkooda, kuwa carqaladeyn ku sameeyay khadadka isgaadhsiinta, laakiin waxaa aad u adkeyd in la dabagalo ama la soo helo kuwaas,” ayuu yidhi. “Laakiin markii aqoonsi jiro, qof walba oo kombiyuutar daba fadhiya waxaa lagu aqoonsanayaa cinwaankooda rasmiga ah.”
Barnaamijka, haddii lagu guulaysto dhaqan galintiisa, wuxuu hoos u dhigayaa kharashka ganacsiga ee shirkado badan oo hadda lacag galiya teknooloojiyad u khaas ah ee ay si gooni ah uga hortagaan dambiyada internetka, ayuu yidhi.
“Dawladdu markay kafaalo qaado dadaalkan, waxay micnaheedu tahay inay dusha u dhiganayso dhamaan kharashka ku baxaya oo aan markaas loo baahan doonin inay shirkadaha goonida ah ilaalo khaas ah u sameystaan” Omariba ayaa sidaas yidhi.
John Thuro, oo gawaadhida ku iibiya Nairobi, wuxuu sheegay in nidaamka cusub uu u suuro galinayo shirkadiisa inay si sahlan ula macaamisho kuwa gawaadhida soo dhoofiya oo jooga dekadda.
“Tani waxay noo tahay nasiino,” ayuu u sheegay Sabahi. “Dib uguma safri doono Mombasa inaan soo iibsado gawaadhida oon lacagtana bixiyo. Waxaan Mombasa u tagi jirnay cabsi aan ka qabnay in lacagatayada nalaka dhaco haddii aan internetka ka adeegano.”
Balse, Crispinus Mwapanga, oo ka shaqeeya teknooloojiyada isgaadhsiinta, kuma hamuun qabo qorshaha dawladda. Wuxuu sheegay in nidaamka aqoonsiga internetka ay macquul tahay inuu hor istaago weerarka internetka, laakiin wuxuu ka cabsi qabaa inuu dawladda u ogolaanayo inay kordhiso kormeerka ay ku hayso dadweynaha iyadoo isticmaalaysa internetka.
“Waxaan uun ka walwal qabaa inaan ku dhacayno dabinka dawladda,” Mwapanga ayaa u sheegay Sabahi. “Waxay u soo jeesteen inay kormeeraan waxaan ku qabsaneeyno internetka iyo inay galaan emailadeena, iyagoo ku xadgudbaya xuquuqdeena khaaska ah kuna magac-sheeganaya inay naga difaacayaan khiyaanalayaasha internetka.”
Isagoo taa ka jawaabaya, Ndemo wuxuu yidhi cabsidaasi mid raad leh ma aha sababtoo ah qarsoodiga macluumaadka dadweynaha waxaa kafaala qaaday dastuurka. Wuxuu sheegay in wasaaradiisu ay bilowday barnaamij dareensiin ah oo lagu burinayo cabsiyahaas.
Waxaa qoray Rajab Ramah oo jooga Nairobi